Ka hor inta deebaajiga ah ee lacagta dhabta ah ciyaaro, aad u baahan tahay in ay iska diiwaan gelin iyo login. Waayo, hab kasta oo lacag bixinta, lagu siiyo tilmaamo faahfaahsan. Waxa kale oo aad sameyn kartaa in abuuro xisaab gaar ah kasta oo hab doorbiday ee lacagaha. Raac tallaabooyinka hoose si ay u sameeyaan deebaaji in aad xisaabta:
.Riix "Lacaghayaha" icon iyo dooro ikhtiyaarka Deposit.
.Dooro hab deebaajiga.
.Buuxi foomka la xiriira jidka deposit xulay, iyo guji Deposit.
.dookhooda koowaad ee lacagta lagu soo oogi doono iyo in aad account waxaa lagu tiriyaa.
.xaqiijinta A mail ku saabsan in faahfaahin macaamil ganacsi ah loo soo diray.
All faahfaahin bangiyada yihiin gebi ahaanba ammaan ah sida TopSlotSite isticmaalaa sirta ah iyo ilaalinta software ugu dambeeyey.
Dhammaan adeegyada maaliyadeed online sameeyeen TopSlotSite waxaa bixiya olor Management Limited. Riix halkan dheeraad ah.
Player xadeynta iyo saaris riix halkan.
Hoos waxaa ku qoran fadlan ka heli theTopSlotSite Table Payment Habka. Wixii tilmaamo dhamaystiran oo la xiriira habka lacag bixinta kasta, riix calaamadda habka. Intaa waxaa dheer, waxaad riixi kartaa on kasta ABUURAN XISAABTA link to furatid xisaab cusub ee habka lacag bixinta la xiriira.
DHIBCAHA IYO debit cards
.macaamil ganacsi lacag multi-Fast adiga oo isticmaaleya isticmaale Debit kaarka Credit /.
.Funds yihiin isla heli karaa account TopSlotSite aad mar wareejiyay
.Si buuxda u waafaqsaneyn Card Payment Industry Standard Data Security (PCI DSS)
.Contact & Taageerada: waayo, wax kasta oo arrimaha ku saabsan kaararka deynta / debit, fadlan kala xidhiidh taageero.
.Sidee si ay u maal: Funds igu samayn karaa adiga oo isticmaaleya isticmaale Credit card Debit /.
.Sidee si ay u maal: Waxaad maalgelin karto xisaabtaada NETeller isticmaalaya hababka soo socda: Card Credit (lacagta Cary ayaa la baaraandegi in waqtiga dhabta ah, idin siinayo dagdag ah si ay u helaan lacagaha!), Online Check (EFT), InstaCASH, iyo Bank Wire.
.Internet Banking: bangiyada qaar ogolaan macaamiisha si ay lacag si toos ah ka xisaab bangi online wareejiyo galay account NETeller. Ka hubi bangigaaga wixii faahfaahin dheeraad ah oo ku.
.Deposit ilaa $250 dul diiwaangelinta xisaabta iyo ilaa $2500 dul xaqiijinta faahfaahinta xisaabtaada bangiga.
.Skrill waa magaca cusub ee Moneybookers, adeeg ku haboon caalami ah bixinta wareejinta lacagta Internetka.
.adeegga kooban ee la 12 luqado iyo fursadaha lacag bixinta gudaha in ka badan taageeray 30 dalalka.
.Adeegyada dheeraadka ah sida diraya SMS iyo fakisyo.
.Contact & Taageerada:
taageero Email heli karaa xarunta taageerada ee www.moneybookers.com
taageero phone Live at (+44) 870 383 0232 Isniin - Sunday 9:00 – 18:00 GMT.
.Sidee si ay u maal: Diiwaangeli dhan credit / kaarka debit iyo bangiga faahfaahin la Moneybookers iyo u isticmaali inay bixiyaan in ka badan 20,000 dukaamo online. This means that you don’t need to provide them each time you want to purchase goods and services online.
.Si aad u bixiso via Ukash, si fudud u dooranayaan Ukash ka Lacaghayaha ee TopSlotSite . Markaas galaan code 19-god iyo qiimaha foojarka. Your payment is accepted immediately.
.Waxaad isticmaali kartaa Ukash in la sameeyo hal lacag ka £ 5 ilaa £ 200 (ama wax u dhigma). Sida isqabin, waa maya "account", no further payments can be taken from you. When you want to pay again, uun ka heli more Ukash.
Haddii aad qabto wax dhibaatooyin ah lacagta dhigaalka, ha ka welwelin, waxaad la xiriiri kartaa mid ka mid ah adeegga macaamiisha dadka aadka u tababaran 24 saacadood maalintii by email, phone ama chat online – Contact Us .